Mpamatsy sokajy catheter ao an-trano - Mpanamboatra sokajy catheter any Sina
LUMEN tokana: 7RF (14Ga) 、 8RF (12Ga)
LUMEN DOUBLE: 6.5RF (18Ga.18Ga) sy 12RF (12Ga.12Ga) ……
Ny IV Catheter dia ampiasaina amin'ny fampidirana ao amin'ny rafitra vaskola peripheral amin'ny klinika amin'ny fampidirana / fampidiran-dra, sakafo maha-ray aman-dreny, fitsitsiana vonjy maika sns. Ny vokatra dia vokatra tsy misy ilàna azy ho an'ny fampiasana tokana, ary ny vanim-potoana maha-tsy misy vokany dia telo taona. Ny catheter IV dia mifandray amin'ny marary. Izy io dia azo tazonina mandritra ny 72 ora ary fifandraisana maharitra.
Izy io dia manana fiasa mandroso. Rehefa vita ny fampidirana dia hisy ny fikorianana tsara rehefa mihodina ny setroka fampidirana, hanosika ho azy ny ranoka ao anaty kateter IV handroso, izay afaka hisorohana ny fiverenan-dra sy hisorohana ny catheter tsy ho voasakana.
Modely: Type Y-01, Type Y-03
Karazana mahazatra, karazana fiarovana, elatra raikitra, elatra mihetsika